Xeer Ilaaliyaha Qaranka: Masuuliyiinta xiran maxkamad baa la s... | Universal Somali TV
Xeer Ilaaliyaha Qaranka: Masuuliyiinta xiran maxkamad baa la soo taagaya
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in maxkamad la soo taaggi doono Agaasime-yaasha ku xiran Magaalada Muqdisho.
Xariga Agaasime-yaasha oo la xiriira arrimo musuq maasuq ayaa bilowday, ka dib markii xubno laga soo xiray Wasaaradda Caafimaadka Somaliya, iyadoo kolkii dambena uu ku fiday Wasaaradaha kale ee Xukuumadda.
Xeer Ilaaliyaha Qaranka ayaa saaka sheegay in cadeymo lagu hayo Masuuliyiinta u xiran eedeymaha ah inay musuq maasuq ku kaceen.
Xeer Ilaaliyaha Qaranka ayaa sidoo kale sheegay in xubnahaasi ay horkeeni doonaan maxkamadda, kolka ay Gorsooreyaasha soo muddeeyaan maxkamadayntooda.
Sidoo kale waxaa uu ka dhawaajiyay in xafiiskiisa uu xoogga saari doono la dagaalanka musuq maasuqa, si dalka iyo dadkaba looga ciribtiro musuq maasuqa wiiqay.
"Waxaan rabaa inaan kuu sheego musuq maasuqa xafiiskeyga wuxuu ka taagan yahay meel aad u adag. La dagaalanka musuq maasuqa iyo la dagaalanka argagixisadu isku meel bay xafiiskeyga ka taagan yihiin." Ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka.
Xeer Ilaaliyaha oo la haday BBC ayaa intaa ku daray "Sida Shabaabka loola dagaalamayo oo la rabo in wadanka looga xoreeyo, oo maalin kasta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay dhiigga u shubayaan, sidaasoo kale baa xafiiskeygu wuxuu waajibka koobaad ka dhigtay in umadda Soomaaliyeed musuq maasuqaan aafeeyay laga dhameystiro, lagana ciribtiro."
Kan-xigaWeerarkii ka dhacay Magaalada Gaalkac...
Kan-horePuntland oo qafiifisay bandowgii ay d...
53,320,382 unique visits